Masayendisiti akawana geni rinovandudza kuberekesa mbatatisi - "Potato System" Magazini
Masayendisiti akawana geni rinovandudza kuberekesa mbatatisi
в Nhau dzenyika, nhau
Masayendisiti kuYunivhesiti yeWageningen muNetherlands uye vamiririri vekambani yemasanganiswa yembatatisi Solynta vakawana iyo Sli mbatatisi jeni, iyo inobatsira kusarudzwa kwezvirimwa. Magazini yesainzi Nature Communicatiuons inonyora nezve izvi.
Izvi zvakaita kuti zvikwanisike kugadzirisa dambudziko nekusagona kwekuberekesa mitsara yakasiyana yeiyo midzi chirimwa. Iyo geni yakawanikwa kuburikidza nemajini kuongorora uye genome kuteedzana. Yakaunzwa mutsika uchishandisa musanganiswa wakasanganiswa. Vatsvakurudzi vakabva vayambuka pamwe nemupi wake mutsara usingawirirane wedhodhi mbatatisi, umo sero rega rega rine seti yakazara yemakromosomes kubva kuvabereki vese. Nekuda kweizvi, zvirimwa zvakazobatana pamwe chete, ndosaka Sli achinziwo anozvionera ega.
Mune ramangwana, masayendisiti anoronga kuumba mitsva mitsva yegene rinobatsira. Sekureva kwavo, izvi zvichavandudza kuravira uye kugadzikana kwechirimwa uye nekuwedzera kugona kwekudiridza. Isu tinoonawo kuti kuwanikwa kwavo kwakaita kuti zvive nyore kuvandudza mbatatisi, iyo yaimbove iri basa rakaoma nekuda kwekuoma kweiyo genome yayo. Uye zvakare, vaongorori vanoda kushandisa ruzivo rutsva kune zvimwe zvirimwa zve nightshade zvakaita semadomasi, mapurantipurosi, mhiripiri, fodya nezvimwe Kuti vaite izvi, ivo vanozoita yekuwedzera kutsvagisa.
Tags: Netherlandskubereka mbatatisi
"GADZIRANA NEMAHARA NEZVEKUVANZIRA": UNGATANGA SEI CHITETE CHAKANAKA